यो कस्तो बिडम्बना ! श्रीमानको मृत्युको पीडाले श्रीमतीले गरिन आत्महत्या - Muldhar Post
यो कस्तो बिडम्बना ! श्रीमानको मृत्युको पीडाले श्रीमतीले गरिन आत्महत्या
मूलधार पोष्ट २०७५, १९ पुष बिहीबार 296 पटक हेरिएको
यो कस्तो समय । पहिल पहिले श्रीमानको मृत्यु हुदा श्रीमती पनि संगै श्रीमानसंगै सती जान्थ्य त्यो परमपरा हराएको अहिले १० अाैं बर्ष भैसक्यो तर कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा भने त्यस्तै सिनारी देखिएको छ । जिल्लाको छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर –७ टोप्ला गाउँ बस्ने एक युवाको मोटरसाईकल दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि उनको १३ दिने काजक्रिया सकेकै दिन श्रीमतीलेपनी आत्महत्या गरेकी छन् ।
२९ वर्षीय नवराज शाहीको गएको हप्ता पुस ७ गते सोरु गाउँपालिकाको तातोपानीबाट आउँदै गर्दा भे ८ प ७०७८ नम्बरको पल्सर मोटरसाईकल दुर्घटना हुँदा मृत्यु भएको थियो । नवराज शाहीकी पत्नी लालुमायाले १३ दिने काजक्रिया सकेकै दिन आत्महत्या गरेकी हुन् । लामो समयदेखि प्रेममा परेपछि लालुमाया केही हप्ताअघि मात्रै परिवारको इच्छा विपरित नवराजको घरमा श्रीमतिकै रुपमा बस्न थालेकी थिइन् ।
श्रीमानको पिडामा परेको स्वर्गिय नवराज शाहिकी पत्नी ३० वर्षीया लालुमायाले गाईगोठमा दोपट्टा कसेर आत्महत्या गरेको प्रहरीले बताएको छ । सोरु गाँउपालिका जिमा गाउँको कर्णाली नदी किनारमा रहेको तातोपानी कुण्डमा नुहाउन आफन्तलाई पुर्याएर बिहीबार घर फर्कँदै गर्दा साँझ ५ बजे फूली गाउँस्थित गमगढी धौकोट धुलाचौर सडककोे भिरमा मोटरसाईकल दुर्घटनामा परी शाहिको मृत्यु भएको थियो । घटनापछि बुधबारै मृतकको लाशलाई पोष्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै धादिङ जिल्लाको काफलपानीबाट ज्वालामुखी गाउँपालिकाको सुनखानीतर्फ जाँदै गरेको मिनी ट्रक बुधवार दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
प्रहरी उपरीक्षक डम्बरबहादुर विकका अनुसार बा ४ ख ८६५८ नम्बरको मिनी ट्रक दुर्घटनापछि जिल्ला अस्पतालमा उपचारको क्रममा ज्वालामुखी गाउँपालिका–१ का ५५ वर्षीय रिम्के परियारको मृत्यु भएको हो । पल्टिएर भएको दुर्घटनामा घाइते ४ जनाकोे अहिले जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।